Izy io dia mpitarika amin'ny famokarana fitaovana fitotoana gorodona sy poloney
Miaraka amin'ny kalitao avo indrindra sy ny serivisy haingam-pandeha haingana, manampy ny mpanjifanay izahay hanatsara ny fifaninanana tsena.
Ny fahafaha-mamokatra isam-bolana dia mihoatra ny 1 tapitrisa, 95% amin'ireo dia aondrana amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Ashine dia nahavita patanty 69, anisan'izany ny mari-pahaizana momba ny fisoratana anarana 43 navoakan'ny EUIPO
Niorina tamin'ny taona 1993, nanomboka namokatra fitaovana fikosoham-bary ho an'ny beton i Ashine tamin'ny taona 1995 ary nanova ny orinasa fototra ho lasa fikosoham-bolo sy fitaovana fanaovana poloney ho an'ny gorodona tamin'ny taona 2004. Ankehitriny, ny ivon-toeram-pamokarana Ashine dia manarona 5000㎡ miaraka amina isam-bolana amin'ny fikolokoloana sy fitaovana fanaovana poloney mihoatra ny 1.000.000 sombiny, 95% amin'ireo dia aondrana manerantany.
Nandritra ny 28 taona mahery ny ezaka nitohy, Ashine dia nahatratra patanty 69, anisan'izany ny mari-pankasitrahana 43 nosoratan'ny EUIPO (Office of Intellectual Property Office). Ashine dia voamarina ihany koa ISO9001 ary neken'ny MPA Alemana momba ny fiarovana koa.
Miaraka amin'ny lanjan'ny fahamendrehana sy ny andraikitra lehibe, Ashine dia mikendry ny ho mpamatsy fitaovana diamondra indrindra ho an'ny fikolokoloana sy ny famolahana. Ashine R&D centre dia manolo-tena amin'ny fikolokoloana sy ny poloney teknolojia, ary miara-miasa amin'ny Sichuan University sy Xiamen University. Miaraka amin'izany, Ashine dia tsy vitan'ny hoe manome vokatra avo lenta, fa manana fahaiza-manaony bebe kokoa amin'ny fanavaozana ara-teknika hamahana olana isan-karazany amin'ny fikosoham-bary sy ny famaohana ho an'ny mpanjifa, izay ampahany amin'ny serivisy OEM / ODM anay. Miaraka amin'ny kalitao avo indrindra sy ny serivisy haingam-pandeha haingana, manampy ny mpanjifanay izahay hanatsara ny fifaninanana tsena.
Kiraro fanaovana diamondra, Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kiraro fitotoana PCD, Pads polishing vita amin'ny beton, Kiraro fitotoana beton, Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra,